Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yamkela ukuKhanya okuKhanya ngokuKhanya ngoku okuvela e-Itali
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles yamkela iindwendwe ezivela e-Itali
I-Seychelles kungekudala izokwazi ukubiza iindwendwe ezivela e-Italiya "iBenvenuto" kwakhona njengoko iSebe lezeMpilo lase-Italiya linika ukukhanya okuluhlaza okuvumela abemi balo ukuba baye kumazwe amathandathu ngaphandle kweYurophu.
Inkonzo yezempilo yase-Italiya ivula i-corridor yokuhamba yasimahla ye-COVID "yohambo lweehambo zabakhenkethi" ngaphandle kweYurophu.
Le paseji isusa isidingo sokwahlukaniswa yedwa njenge-COVID-19 yokhuseleko xa ufika okanye ubuya kwindawo oya kuyo.
Abakhenkethi abangama-27,289 ababevela e-Italiya batyelela iSeychelles e2019, xa yayiyindawo yentengiso yesine ekhokelela kwindawo.
Iziqithi zeparadesi zoLwandlekazi lwaseIndiya zaseSeychelles zezinye zeendawo ezingezozabaseYurophu abemi base-Itali abanokuhamba kuzo njengoko isebe lezempilo lase-Italiya livula ipaseji yokuhamba yasimahla ye-COVID "yohambo lwabakhenkethi abalawulwayo" ngaphandle kweYurophu ngaphandle kwesidingo sokubekwa bucala njenge-COVID -19 Izilumkiso nokuba ufika okanye ubuya kwindawo oya kuyo.
Kumazwi akhe okuvula kwingxelo eyenziwe kwiNdlu yoWiso-mthetho yeSizwe ukuphawula uSuku loKhenketho lweHlabathi nakwiVeki yeHlabathi yezoKhenketho ngoLwesithathu umhla we-29 kweyoMsintsi, uMphathiswa weSeychelles Wezangaphandle nezoKhenketho uSylvestre Radegonde wasincoma esi sibhengezo “njengeendaba ezimnandi, iindaba ezimnandi ngenene.”
Ethetha ngokubaluleka kolu phuhliso lutsha njengoko ilizwe lilungiselela ukwamkela iindwendwe ezivela kwindawo yentengiso yezorhwebo eyayisakuba yeyesine ekhokelayo kwisiqithi soLwandlekazi lwase-Indiya, uNobhala oyiNtloko kwezoKhenketho uSherin Francis uthe uyavuya zezi ndaba, esithi: sijonge phambili ekwamkeleni iindwendwe zethu ezidibeneyo zase-Italiya ezaziwa ngomtsalane wazo kunye 'nejoie de vivre.'
Abantu base-Itali bahlala bonwabela uluhlu olubanzi lweemveliso Seytshels kufuneka inikezele, ngakumbi iihotele zethu ezinobungakanani obuphakathi ngokusekwe kwiPraslin. Banomdla kwaye bonwabile kukuhlola iziqithi, ukuya kuhambo, ukuhamba esiqithini, ukuhamba ngeendlela, ukutya ngaphandle kunye nokufumanisa indawo ekuyiwa kuyo ngokubanzi. Inani elifanelekileyo leepropathi zethu zineendwendwe zazo ezinyanisekileyo eziphindaphindayo zase-Italiya ezijonge phambili ekuhambeni xa isibane esiluhlaza sinikiwe. I-Seychelles ibikwayindawo ekufunwa kuyo emitshatweni ngabantu base-Italiya. ”
Abakhenkethi abangama-27,289 ababevela e-Italiya bandwendwela i-Seychelles e-2019, xa yayiyindawo yentengiso yesine ekhokelayo kwindawo leyo yayi-10% yabantu abavela eYurophu.
Ukusukela kwinqanaba lokugqibela lokuvulwa kwakhona kwemida yayo nge-25 ka-Matshi kulo nyaka, indawo oya kuyo inikezelwa ziinqwelomoya ezingekho ngaphantsi kwama-32 ngeenqwelomoya zamanye amazwe ngeveki, ngaphandle kokubala iinqwelomoya ngeenqwelomoya zelizwe i-Seychelles kunye neenkonzo eziza kwenziwa kungekudala ziinqwelomoya zaseYurophu iCondor. kunye neAir France.